Meicet |China Skin Analyzer Machine Manufacturing and Factory
5 Spectra:RGB, CPL, PPL, UV, hazo
Sary 15:Faritra mena, UV, Monochrome, Green, Wood's, sns.
Fiteny 10:Sinoa, Anglisy, Alemana, Espaniola, Frantsay, Italiana, Korea, Portiogey, Okrainiana, Hebreo
Asa:Fantaro ny ketrona, ny fahatsapana, ny pigmentation, ny akne, ny pore, sns.
Jiro LED:16 Sets, 360 ° Cross Light Source Distribution
Meicet MC88 AI milina famakafakana hoditra matihanina
Ataovy araka ny marina ny consulting, manamora ny fahatokisana
Ny MEICET Skin Analysis System dia manome traikefa mihatsara kokoa amin'ny fifampidinihana momba ny hatsarana sy ny fikarakarana hoditra.
Ny logiciel MEICET dia manatsotra ny fizotran'ny sary.
Ny teknolojia famakafakana sary maro samihafa dia ampiasaina handrefesana sy hanehoana ny toetry ny hoditra sy ambanin'ny tany.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny mpanadihady hoditra matihanina, ny fifampidinihana momba ny fitsaboana marina dia azo atolotra mora amin'ny mpanjifa.
Loharano jiro LED nafarana avy any Japana
10 fiteny maro no tohana
Orinasa manokana ny fenitra iraisam-pirenena
Afaka manampy fiteny namboarina
Fanavaozana rindrambaiko maimaim-poana
Fahazavana RGB, Hazavana Cross-Polarized, Hazavana Parallèle-Polarized, Hazavana UV, Hazavana
Ny milinanay dia haka sary 5 miaraka amin'ny segondra amin'ny fampiasana spektrum samihafa.Ireo sary 5 ireo dia hodinihin'ny Meicet App, ary farany dia sary 15 no azo alaina hanampiana amin'ny fanehoana olana amin'ny hoditra.
Smart AI teknolojia
Teknolojia fitrandrahana soritr'aretina hoditra sy informatika rahona.
MEICET mpandinika hoditradia mpanampy mahomby sy ilaina ho an'ny salon hatsaran-tarehy, toeram-pitsaboana hoditra ary fitaovana tonga lafatra ho an'ny orinasa kosmetika.
15 Sary nodinihina
Fahatsapana / pigmenta amin'ny ety ivelany / ketrona / mason-koditra / pentina / akne / taratra UV / taonan'ny hoditra / lokon'ny hoditra / tavela simika
MC88 Software Functions
Skin Test Pen
Ity pen ity dia afaka mitsapa ny handriny, ny tarehy havia ary ny tavanao havanana amin'ny hamandoana, menaka ary elasticité ho vokatr'izany.ent.
Data momba ny elasticité menaka hamandoana
Ny angon-drakitra momba ny solika sy ny elasticité nosedraina tamin'ny penina fitsapana hoditra dia azo aseho amin'ny tatitra.
Ny mpampiasa dia afaka manampy sy mitantana vokatra, fitsaboana ary serivisy mora foana amin'ny SETTINGS- SOLUTIONS.
Vahaolana momba ny tatitra
Afaka mahazo ny vahaolana aroso ny mpanjifa rehefa manamarina ny tatitra.
1. Tohano ny fampitahana sary samihafa amin'ny fe-potoana mitovy.Ohatra, ao amin`ny aretina, dia afaka misafidy 2 samy hafa sary mba hamantarana ny mitovy soritr`aretina ny hoditra, toy ny, mba hamakafaka ny olan`ny pigments, dia afaka misafidy CPL sy UV sary.Ny sary CPL dia manambara olana amin'ny pigment izay hita amin'ny maso mitanjaka, ary ny sarin'ny UV dia maka olana amin'ny pigment lalina izay tsy hitan'ny maso.
2. Ny sarin'ny daty samihafa dia azo ampitahaina ho fototry ny adihevitra momba ny fahombiazana.Ny sary mialoha sy aorian'ny fitsaboana dia azo fidina ho fampitahana mba hampisehoana ny fiantraikan'ny fifanoherana mialoha sy aorian'ny fitsaboana.
3. Rehefa mampitaha sary dia azonao atao ny mi-zoom in na mi-zoom out.Azo alaina hatramin'ny in-5 ny sary tany am-boalohany;aorian'ny zoom in ny soritr'aretin'ny olana dia azo jerena mazava kokoa.
Ireo singa mifandraika amin'ny MC88
A2197, A2270,A2316, A2228, A2229, sns.
Ankavia, Avoana, Ankavanana
MC88 Accessories sy ny fametrahana
teo aloha: 3D Skin Scanners Meicet MC88 ho an'ny fivarotana kosmetika
Manaraka: Milina famakafakana hoditra ho an'ny Salon hatsaran-tarehy Meicet MC88
milina famakafakana tarehy
Famakafakana hoditra tava
Masinina famakafakana hoditra
Famakafakana hoditra matihanina
Mpanadihady hoditra matihanina
Fanombanana ny fikarakarana hoditra
Machine Diagnose hoditra
Machine Scanner hoditra
Mpanamboatra milina mpandinika hoditra matihanina...